Indlu epholileyo e-Asturias - I-Airbnb
Indlu epholileyo e-Asturias
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguTino
Le ndawo iya kukunika ithuba lokuhamba, ukunyuka, ukukhwela iibhayisikile kwindawo eyoyikekayo yase-Asturias. Iikhilomitha ezingama-30 ukusuka e-Oviedo (ikomkhulu le-Asturias) kunye neekhilomitha ezingama-55 kude nolwandle olusondeleyo eGijón. Le ndlu ibekwe kwindawo entle ukuze kubonwe izilwanyana zasendle ezifana nebhere elimdaka yaye ebudeni beenyanga zikaSeptemba no-Oktobha ucamngce ngokufutha kwamaxhama.
Indlu inendawo ye-diaphanous enemibono engenakulinganiswa edibanisa isitayile sanamhlanje kunye nesisebenzayo kunye nendawo ekhethekileyo, ukubakho kokuphumla ngokupheleleyo kwaye apho indalo ithatha indima ephambili, kunye nefauna etyebileyo kunye neflora kunokwenzeka ukujonga iintlobo ezininzi zeentlobo. .
Inkqubo yokufudumala isekelwe kwikhitshi yokhuni kunye namalahle kunye nezifudumezi ezimbini zombane.
Indawo izolile kodwa inamandla amakhulu. Ukuba uza apha uzimisele ukuziva ukhululekile okanye ukufumanisa ukuba imo engqongileyo inikezela ntoni ayihambelani kwiProacina. Ukubona izilwanyana zasendle kunye nokhenketho olusebenzayo zezinye iindawo ezinomtsalane ezibonelelwa ngulo mmandla unethamsanqa.
Umbuki zindwendwe ngu- Tino
Umnqweno wam kukuba abo banandipha iintsuku ezimbalwa e-Proacina, basekhaya kwaye bayazi le ndawo ikhethekileyo yentaba yase-Asturian. Ngesi sizathu, ukuze ndikwazise ngawo nawuphi na umbuzo okanye iimfuno zeendwendwe ndiya kuyenza ngolonwabo, nokuba ngeqonga okanye ngefowuni kunye nezicelo zeselfowuni.
Umnqweno wam kukuba abo banandipha iintsuku ezimbalwa e-Proacina, basekhaya kwaye bayazi le ndawo ikhethekileyo yentaba yase-Asturian. Ngesi sizathu, ukuze ndikwazise ngawo nawuphi…
Inombolo yomthetho: CA-1492-AS